Candy manorotoro Level 1442 Cheats and Tips - Lalao famoronana Candy - Free Lives Tips Cheats Hints
You are here: Home / Lalao famoronana Candy / Candy manorotoro Level 1442 Cheats and Tips
Last updated on Novambra 11, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
Tsy hidina atsy ho atsy ny tazo Candy Crush, ary rehefa miakatra hatrany amin'ny ambaratonga ambony ny olona, tsy mitsaha-mitombo ny hafanam-pon'izy ireo. Loko masiaka nefa amin'ny fomba mahafinaritra. Ampahany amin'ny lalao ny ambaratonga sarotra, noho izany dia namolavola ity ampahany ity izahay mba hanomezana anao ny haavon'ny Candy Crush 1442 Cheats and Tips!
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny Candy Crush dia ny hoe ny ambaratonga ambony dia manana endri-javatra miavaka izay tsy mora voavaha. Izany dia manome fahafahana ho an'ny mpilalao tsy tapaka sy mazoto mba hahazo tombony amin'ny fifaninanana amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fihetsika swipe sy fandresena toa tsotra dia voasedra rehefa miatrika tanjona tena sarotra ny mpilalao ary mahatonga anao hampiasa ny noggin-nao..
Na izany aza, ny lalao no tsara indrindra tahaka ny misy azy; ankehitriny, tsy mila ado intsony, andao hihady avy hatrany.
Ny tanjon'ny Level-1442 amin'ny Candy Crush Saga dia ny hanangona hazela iray sy serizy iray. Ity ny fisamborana, tsy maintsy manao izany amin'ny rariny ianao 20 moves; ambonin'izany, there are two locks that need to be unlocked and there are jelly makers at the bottom that keep spawning jellies to block your path. The collection points are at the bottom and getting the ingredients there has proven out to be one hectic task.
Mihodina tsy an-kijanona ny mpitetika ratsy ary mamoaka ny jelly rehefa feno. Mila manakorontana tsy tapaka izy ireo ary rava miaraka amin'ny fanehoan-kevitry ny rojo mba hahatonga ny lalana handehanan'ireo akora..
Candy manorotoro Level 1442 Soso-kevitra sy fika:
Na dia sarotra aza ny haavony ary afaka manandrana maromaro alohan'ny handosiranao azy, manantena izahay fa ny toro-hevitra ho hitanao eto ambany dia hanampy anao handalo ity ambaratonga ity amin'ny fanandramana vitsivitsy araka izay azo atao.
Tohizo ny fifantohanao amin'ireo mpamboly ratsy. Alefaso eo akaikin'izy ireo na ampiasao vatomamy nesorina ambony mba hanakorontanana azy ireo. In-telo nifandona, hitsahatra ny fanatodizana izy ireo.
Ataovy azo antoka ny mamoha ny tratra mihidy miaraka amin'ny fanalahidin'ny vatomamy. Izany dia hanome anao kodiaran-boaniho roa izay azonao mivily miankavia sy miankavanana hanaovana vatomamy mibaribary mba hanakorontanana ireo mpametaveta ratsy..
Satria ny tanjona dia ny hanangona ny akora, miezaka ny hanadio ny spawners amin'ny farany ambany amin'ny alalan'ny kapoka azy in-dimy.
Hanomboka fihetsehana rojo vy izany ary ho rava avokoa ny mpitetika.
Milalao eo ambany fa tsy ambony. Izany dia hanome fahafahana ho an'ny hetsika vaovao sy fahafahana hamorona vatomamy manokana.
Araho maso ny isan'ny hetsika tavela. Ny iray amin'ireo fahadisoana lehibe ataon'ny mpilalao dia ny fahaverezan'izy ireo amin'ny lalao ka tsy fantany akory rehefa tsy mihetsika izy ireo..
Raha afaka ianao, avy eo dia manoro hevitra ny hampiasa vatomamy manokana izay azonao isafidianana eo am-piandohana. Satria voafetra ny fihetsehanao, mety manomboka matanjaka raha tsy heverinao?
Noho izany, tsy dia sarotra loatra izany? Ravao ny mpitsikilo, misokatra vata vatomamy, manangona serizy sy hazelnut, ary afaka mandeha ianao. Amin'ny manaraka indray, mijanona mamy!!!